Mobiles 8 kacha mma maka ihe na -erughị euro 200 - Septemba 2021 | Androidsis
Mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 200
Gbanwe ekwentị mkpanaaka gị abụbeghị ọrụ dị mfe. Ọ bụ tupu, mgbe mobiles dị nnọọ mfe na ihe fọrọ nke nta onye ọ bụla mere otu ihe na o siri ike gbanwere karịa imewe, na ọ bụghị ugbu a, na a ahịa ebe onyinye a na-abawanye ma dị mma, ngwaọrụ ndị a na-adịkarị ọnụ ala yana kwa oge ụfọdụ, akara ahụ dị mma nke na-ekewa ala, ọkara na ọkwa dị elu na-agba agba site na njirimara ndị na-ahụkarị ekwentị dị oke ọnụ karịa ngwaọrụ anyị na-enyocha.
Anyị ga-egosi gị nhọrọ na ụfọdụ n'ime igwe kachasị mma maka ihe na-erughị euro 200, na echiche na akpa gị emetụtaghị oke. Mana nke kachasị, anyị ga-anwa ịnye gị ọtụtụ usoro ga - enyere gị aka mgbe ị na - ahọrọ. Anyi ka anyi bido?
1 Igwe ekwentị kachasị mma n'etiti etiti maka ihe na-erughị euro 200
1.1 Xiaomi Redmi Rịba ama 4
1.5 Ọgbọ nke ise Moto G
1.6 Meizu M3 Rịba ama
2 Etu ị ga - esi họrọ ekwentị kacha mma n’ihe na - erughị euro 200
2.2 Mee ka mkpa anyị nwee
2.3 Uru maka ego
Igwe ekwentị kachasị mma n'etiti etiti maka ihe na-erughị euro 200
Dị ka ị maraworị, maka nhọrọ a, anyị etinyela oke na euro 200, ihe mgbochi "gọọmentị" n'etiti etiti dị ala na etiti. Ma wetuo obi! Ngwa ekwentị mkpanaaka niile anyị ga - egosi gị n'okpuru nwere ezigbo mma ma zute mkpa na atụmanya nke imirikiti ndị ọrụ.
Ikwesiri iburu n'uche akụkụ ụfọdụ:
Igwe ekwenti ha na-agbanwe ọnụahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile; enwere onyinye, ego, nkwalite na ọnụego dị mfe, yabụ ọ nwere ike ịbụ na ekwentị mkpanaaka nke enweghị ike ịbanye na nhọrọ a n'ihi oke ọnụahịa, mee ya na ụbọchị ole na ole.
Ọnụ ọgụgụ nke gam akporo ekwentị n'okpuru euro 200 bụ ihe ịtụnanya, ọ na-aga n'ihu na-eto. Ya mere, "Ọ bụghịkwa ndị niile dị, ọbụkwa ndị niile bụ". May nwere ike na-efu ụfọdụ, mana cheta na ọ bụ nhọrọ.
Nhọrọ ndị na-esonụ abụghị ọkwa, ha anaghị enye iwu site na ụdị mmasị ọ bụla, ha bụ ụfọdụ n'ime igwe kachasị mma maka ihe na-erughị euro 200 na ị nwere ike ịchọta n'ahịa taa.
Ma ugbu a ee, anyị na-amalite!
Anyị na-amalite site na otu ọkacha mmasị m, Xiaomi's Redmi Rịba ama 4, ama dị ịtụnanya na anyị nwere ike ịchọta ihe karịrị 150 euro na ikike 16 GB, yana ihe dịka euro 175 na 64 GB (ọ dabere na onye na-ere ahịa, n'ezie). Ihe ngosi Redmi 4 biara Android Marshmallow n'okpuru mara mma oyi akwa MIUI 8, a 5,5-anụ ọhịa FullHD ihuenyo, MediaTek Helio X20 nhazi ihe ruru 2,1GHZ, 3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram, SIM abuo, 16 ma obu 64 GB nke nchekwa di n'ime, nkwado kaadi MicroSD, ihe di egwu 4.100 mAh batrị. Na nkenke, ọ bụ otu n'ime ekwentị ndị mara mma ma dị ike na ahịa maka ihe na-erughị euro 200.
Anyị na-awụlikwa onye South Korea ibu na Galaxy J5 ya, ekwentị mkpanaaka gam akporo anyị nwere ike ịnweta ebe a Ọzọkwa maka ọnụahịa nke gbara ya gburugburu 155 euro ihe dị ka. Ama a nwere 5,2-anụ ọhịa Super AMOLED ngosi, 2GB nke ebe nchekwa RAM, 16 GB nke nchekwa esịtidem, 13 megapixel isi igwefoto, ihe Ultra Power Saving Mode zuru oke maka ịgbatị gị 3.100 mAh batrị, SIM abuo, ndakọrịta na kaadị microSD ... Nnukwu nsogbu bụ na ọ na-abịa na Android 5.1 Lollipop mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ otu n'ime igwe mkpanaka kachasị mma maka ihe na-erughị 200 euro bara uru maka ego.
Owuwe ihe ubi emere na Spain bụ ama ama a ama ama etinyegoro sistemụ arụmọrụ Android 7.1.1 Nougat. Ọ bụ ihe BQ Aquarius U Plus, nke rutere na a 5-anụ ọhịa IPS ihuenyo na HD mkpebi (1280 x 720 pikselụ), 430 GHz Octa-isi Snapdragon 1,4 processor, 2 GB RAM, na 16 GB nke nchekwa - arụ ọrụ site na microSD kaadị ruo 64GB ọzọ, 3.080 mAh batrị na ọtụtụ ihe maka ọnụahịa dị gburugburu 188 euro. BQ abụrụla otu n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ ndị Spain kachasị elu, yana ngwaọrụ a gosipụtara ya ọzọ.
Firmlọ ọrụ Huawei enweghị ike ịnọ na nhọrọ a nke ekwentị kacha mma maka ihe na-erughị euro 200, maka ihe ọ bụ onye nrụpụta izizi n'ahịa kachasị ukwuu n'ụwa, China, na otu n'ime ndị ama ama ama ama n'ụwa niile. .
El Huawei P8 Lite guzo apụ maka ya mara mma ma kpachara anya, nke nwere oke nke 7,7 millimeters, nwere oke dị larịị, na-enweghị protrusions. O nwere octa-core Kirin 620 processor, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa dị n'ime ị nwere ike ịgbasa na kaadi microSD, ọgụgụ isi audio amplification usoro na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ugbu a ị nwere ike ịchọta maka ọnụahịa gbara gburugburu 150 euro.
Nke a bụ nnukwu ama ama kwa ụbọchị, na-akwado ugwu na mma nke Lenovo - Motorola. Ejiri aluminom mee ya na ejiri ola diamond na-enye ya ihe zuru oke zuru oke, o nwere ihuenyo 5-inch FullHD, Snapdragon 430 asatọ isi 1.4 GHz processor, 2 GB nke RAM, 16 GB nke nchekwa nchekwa dị n'ime, igwefoto isi 13 megapixels. , Batrị 2.800 mAh na gam akporo 7 Nougat. Pricegwọ ya? Gburugburu 189 euro na Amazon.
Meizu M3 Rịba ama
Otu ụlọ ọrụ ndị China kachasị ama ama na ọdịda anyanwụ ụwa bụ Meizu, nke pụtara iche na nke a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., a mma smart ekwentị 5,5-anụ ọhịa FullHD ihuenyo na obere-ike ihe mmetụta ike, niile-metal ahu mere nke 6000 Series aluminum na 4.100 mAh batrị.
Tụkwasị na nke a, ọ na-ejikọ isi asatọ, nke na-arụ ọrụ ike dị elu Helio P10 processor nke ya na 860-bit Mali T64 GPU na-esonyere. Na ihe a niile maka ọnụahịa nke bụ mgbe ụfọdụ n'okpuru euro 145-150.
Ya mere, anyị rutere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'Eshia, nke amachaghị karịa ndị gara aga mana nke na-apụta n'oge ụfọdụ yana ngwaọrụ dị mma yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Na nke a, Elephone S7 bụkwa otu n'ime mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 200 ị nwere ike ịchọta taa.
N'ezie, imewe ahụ ga-echetara gị ọtụtụ Galaxy S7. Ọ nwere 5,5 anụ ọhịa ahụ na nchekwa Gorilla Glass 3 na mkpebi 1280 x 1920, yana ọmarịcha mma, ọmarịcha mma ma na-egbu maramara.
N'ime, a Helio X20 64-bit processor 10-isi na 3 ma ọ bụ 4 GB nke Ram na 32 ma ọ bụ 64 GB nke nchekwa Esịtidem expandable site na kaadi microSD. Na-enye a Igwefoto buru ibu 13 megapixel nke ahụ na-edekọ vidiyo na 1080p, autofocus, SIM abụọ, akara mkpisiaka, 3.000 mAh batrị na, dị ka sistemụ arụmọrụ, Android Marshmallow.
Ọ bụ ezie na ọnụahịa ya na-amalite na euro 229, ọ bụ mgbe dị na amazon na ndị ọzọ na-ere ákwà maka ihe na-erughị euro 200.
Anyị gwụchara ihe atụ sitere na usoro Xperia sitere na Japanese Sony, ama nke na-enye 5 inch nke HD na ụlọ nwere Mediatek Helio P10 processor, yana 2 GB nke RAM na obere batrị dị mma ma dị mma. 2.300 mAh.
Na igwefoto igwe 13-megapixel na 8-megapixel n'ihu, Xperia XA, nke ahụlarịrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị agbadata ego ya, bụ nke ọzọ dị mma kacha mma-nhọrọ dị n'okpuru 200 euro.
Etu ị ga - esi họrọ ekwentị kacha mma n’ihe na - erughị euro 200
Isi ihe anyị niile na-echebara mgbe anyị gbanwere ekwentị (nke ọma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile) bụ ọnụahịa, agbanyeghị, Ozugbo anyi matara uzo anyi ga - aga, nke bu mgbe oru ihe ichoro nke ichoputa malitere. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na, n'okwu zuru oke, enwere ekwentị ndị dị mma karịa ndị ọzọ, dị ike karị, na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, nwere ọtụtụ atụmatụ, wdg, eziokwu mechara gosipụta na kacha mma mobile bụ na nke kacha mma na-aza onye ọrụ mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anaghị m edekọ vidiyo, gịnị kpatara m ga-eji tinyekwuo ego na ekwentị nke na-edekọ vidiyo ka mma?
Mgbe ị na-ahọrọ ekwentị mkpanaaka ọhụrụ iji dochie ọdụ ochie anyị, nke kachasị mma bụ attentionaa ntị na akụkụ atọ akọwapụtara nke ọma:
Ọfọn, kama, mmefu ego. Ọ bụrụ na anyị enweghị ego niile dị n'ụwa, ọ ka mma ịghara "ịgba ọbara anyị ọkụ" na-ele ekwentị mkpanaaka nke anyị maara na anyị agaghị enwe ike ịzụta. N'okwu a, anyị ga-etinye njedebe na euro 200. Maka ọtụtụ ndị, nke a bụ oke dị n'etiti etiti dị ala na etiti etiti, agbanyeghị, dịka anyị abanyelarị na mbido, ókè ndị ahụ na-esiwanyewanye ike, yabụ ekwela ka e duhie gị. Site na ndepụta anyị wetaara gị n’okpuru, ị ga - ahụ na enwere ekwentị dị mma na ọnụ ahịa dị oke mma.
Mee ka mkpa anyị nwee
Anyị ekwuworị na mmalite, anyị na-ekwusi ike. Ọ bụ ihe dị mfe dịka ịghara ịkwụ ụgwọ maka ihe ị na-agaghị eji. Chee echiche banyere ihe ị chọrọ ekwentị maka, chee echiche otu ị ga - esi jiri ya na otu ị ga - esi nye ọnụ gị ọhụụ, ma chọọ ihe nlere kachasị mma. Mgbe ụfọdụ anyị na-ebufu nnukwu ihe dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ na, n'eziokwu, anyị agaghị eji ya. N'okwu a, anyị na-ahụkarị akụkụ dịka nha ihuenyo, ogo igwefoto, ikike nchekwa dị n'ime, na ihe ndị ọzọ.
Nke a bụ akụkụ nwere njikọ chiri anya na nke gara aga, na nke nyocha kachasị mma na atụnyere nke ndị na-azụ ahịa na-elebara anya pụrụ iche. Nnukwu aha pụtakwara nnukwu ọnụ ahịa, ọ bụ ihe gbasara ugwu, oghere, iche, enweghị ike ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ ịkpọ ya, mana ọnụahịa dị elu apụtaghị na ọ dị elu, Ya mere, ka anyị kpachara anya.
Ya mere, ịhọrọ ezigbo nhọrọ, ọ kacha mma ka ị jiri nwayọ; Ka anyị nọrọ jụụ maka nkeji ole na ole, setịpụrụ oke ọnụ ahịa nke anyị nwere ike ma ọ bụ dị njikere ịkwụ, ka anyị tụlee otu anyị si eji ama dị ugbu a na ihe anyị chọrọ, site na ebe ahụ, ka anyị malite ilele nhọrọ n'echefughị ​​ihe niile. N'elu na ama mara mma-price ruru.
Ruo ugbu a, nhọrọ a nke mobiles kacha mma maka ihe na-erughị euro 200. Anyị etinyela ọnụ, nke na-adịghị njọ, mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Cheta na Ihe dị mkpa abụghị atụmatụ anyị, mana na ị ga-ahọrọ ọnụ nke kachasị mma maka atụmanya gị, ojiji na mkpa gị.
Kedu ekwentị mkpanaaka nke na-erughị euro 200 ị ga-agbakwunye na listi ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Mobiles kachasị mma maka ihe na-erughị euro 200
Alberto Suarez onye nhazi ihe oyiyi dijo
Ajụjụ: ihe Xiaomi redmi rịbara 4 na-abata na ụdị 32 gb ROM? Ebe ọ bụ na ha na-ezo aka na 16 na 64 gb
Zaghachi Alberto Suarez
Ndewo Alberto. Ee, ọ dị na 32GB ROM.
Na uche gị, kedu nke ị ga-azụta na moto G5 ma ọ bụ bq Aquarius u plus 3 gigabytes nke ebule n'ezie na-ekele gị nke ukwuu maka enyemaka
Ọfọn, na-eburu n'uche na ha na-eri otu ma BQ nwere batrị ọzọ, m nọ na Spain ga-atụba eriri na ụlọ ọrụ Spanish ma m ga-ahọrọ BQ Aquarius U Plus. Ma bia, ọ bụ naanị echiche.
Daalụ nke ukwuu maka ileta anyị.
Enyemaka: dị ka uche gị si dị, nke ekwentị yiri ka ọ zuru oke, ihe meizu m5 ma ọ bụ ihe ngosi xiaomi redmi 4, bụ na achọrọ m ịzụta otu na anaghị m ekpebi, ekele n'ọdịnihu
Zaghachi Junior didac
Ndewo Junior. Ngwanụ ka anyị hụ, n’uche m, ha abụọ yikwara nke ukwuu, ọbụlagodi na batrị (echere m na ị na-ekwu maka Meizu M3 Note), na Meizu dị ọnụ ala karịa Redmi Rịba ama 4, yabụ maka akụ na ụba, Meizu. Ugbu a, atụmatụ nke Xiaomi na oyi akwa MIUI 8 na-efunahụ m, ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwa Xiaomi ọ bụla, dị ka Mi Band, a ghọtara ha nke ọma, ya mere n'akụkụ ahụ m ga-anọnyere Xiaomi. Ha abụọ dị ezigbo mma yabụ, belụsọ ma inwere nsogbu, nke nwere ike ịme, ma ọ bụ ezigbo nhọrọ.
Echere m na m enyerela gị aka, ọbụlagodi obere hehe.
Na echiche gị nke ka mma (n’ihe niile) Samsung Galaxy J5 ma ọ bụ Motorola G5
Ndewo, a na m achọ igwe ihe ruru € 150 ma enwere m obi abụọ n'etiti Bq aquarius U2, Huawei Y6 Pro na Xiaomi Redmi 4x.
Karịsịa, enwere m obi abụọ na nhazi nke ụdị nke ọ bụla, n'ihi na ikike ncheta ya adịghị eweda m ala nke ukwuu, na igwefoto.
Ihe abụọ ahụ ga - eme ka m kpebie ma eziokwu bụ na enwere m obi abụọ na ọtụtụ ụdị. N’ụlọ ahịa ahụ m lere anya ha na-ekwusi ike na Bq dị mma nke ukwuu, nke ahụ na-emekwa m obi abụọ
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka, m ga-enwe ekele.
A ga-emelite OnePlus 3 na 3T na gam akporo O na njedebe nke 2017
Facebook Messenger na-agbakwunye mmeghachi omume na nzacha na oku vidiyo